Vaovao - Taona adala amin'ny indostria tsy tenona manerantany
Noho ny fiantraikan'ilay valanaretina satro-boninahitra vaovao tamin'ny taona 2020, ny ankamaroan'ny indostria dia niaina fe-potoana fahatapahana, ary niato vetivety ireo hetsika ara-toekarena isan-karazany. Amin'ity toe-javatra ity, ny indostrian'ny lamba tsy tenona dia be atao noho ny hatramin'izay. Toy ny fangatahana vokatra toy nymamafa otrikaretinaary ny sarontava dia nahatratra ny ambaratonga tsy nisy toy izany tamin'ity taona ity, ny tatitra momba ny firongatry ny fangatahana fitaovana substrate (fitaovana notsofina notsoahina) dia nanjary be mpampiasa, ary maro ny olona no nandre teny vaovao ho an'ny lamba Spun voalohany, nanomboka nandoa bebe kokoa ny olona ny fiheverana ny andraikitra lehibe ilain'ny fitaovana tsy tenona amin'ny fiarovana ny fahasalamam-bahoaka. 2020 dia mety ho taona very ho an'ny indostria hafa, saingy ity toe-javatra ity dia tsy mihatra amin'ny indostria tsy tenona.
1. Ho valin'ny Covid-19, mampitombo ny famokarana ny orinasa na manitatra ny sehatry ny orinasany amin'ny tsena vaovao
Herintaona mahery izay taorian'ny nitaterana ny tranga Covid-19 voalohany. Rehefa niely tsikelikely avy tany Azia ka hatrany Eropa ny virus ary farany tany Amerika Avaratra sy atsimo tao anatin'ny volana vitsivitsy tamin'ny taona 2020, indostrialy maro no miatrika fampiatoana na fanidiana. Ny indostrian'ny lamba tsy tenona dia nanomboka nivelatra haingana. Tsena marobe ho an'ny serivisy tsy misy tenona (fitsaboana, fahasalamana, fidiovana, famafana, sns.) No nambara fa orinasa ilaina mandritra ny fotoana ela, ary misy ny fangatahana fatratra ho an'ny fitaovam-pitsaboana toy ny akanjo fiarovana, sarontava ary respirator. Midika koa izany fa orinasa maro ao amin'ny indostria no tsy maintsy mampitombo ny famokarana na manitatra ny orinasany efa lasa tsena vaovao. Araka ny lazain'i Jacob Holm, mpanamboatra lamba spunlace Sontara, satria nitombo tamin'ny volana Mey ny fangatahana fitaovam-piarovana manokana (PPE), nitombo 65% ny famokarana an'ity fitaovana ity. Jacob Holm dia nampitombo be ny famokarana tamin'ny alàlan'ny fanesorana ny kilema amin'ny tsipika efa misy sy ny fanatsarana hafa, ary tsy ela dia nanambara izy ireo fa hatsangana ny orinasa fanitarana vaovao manerantany, izay hapetraka amin'ny fiandohan'ny taona ho avy. DuPont (DuPont) dia mamatsy tsy tenona an'i Tyvek amin'ny tsenan'ny fitsaboana nandritra ny taona maro. Satria ny virus coronavirus dia mitarika ny fangatahana fitaovana ara-pahasalamana, dia hamindra ireo fitaovana ampiasaina amin'ny tsenan'ny fananganana sy ny fampiharana hafa any amin'ny tsenan'ny fitsaboana i DuPont. Mandritra izany fotoana izany dia nanambara fa ho any Virginia izy io. Ny fanjakana dia nampitombo ny fahafaha-mamokatra hamokatra vokatra fiarovana ara-pitsaboana bebe kokoa. Ho fanampin'ny indostria tsy tenona, ireo orinasa hafa izay tsy nandray anjara tamin'ny fomba nentim-paharazana tamin'ny tsenan'ny fitsaboana sy ny tsenan'ny PPR dia nanao hetsika haingana ihany koa hamaly ny fitomboan'ny fangatahana ateraky ny virus vaovao. Ny mpanamboatra vokatra Johns Manville dia manamboatra ihany koa ireo fitaovana meltblown novokarina tany Michigan ho an'ny saron-tava sy ny saron-tava, ary ireo tenona tsy misy tenona ho an'ny rafi-pitsaboana any South Carolina.
Mpanamboatra lamba tsy tenona mitarika 2.Industry mba hampitomboana ny fahafaha-mamokatra meltblown amin'ity taona ity
Ao amin'ny 2020, efa ho 40 ny tsipika famokarana meltblown vaovao kasaina ampiana any Amerika Avaratra fotsiny, ary zotram-pamokarana vaovao 100 no azo ampiana manerantany. Tamin'ny fiandohan'ny valan'aretina dia nanambara ny mpamatsy milina meltblown Reifenhauser fa afaka hanafohezana ny fotoana fandefasana ny tsipika meltblown ho 3.5 volana, ka hanome vahaolana haingana sy azo antoka ho an'ny tsy fisian'ny sarontava manerantany. Berry Group dia teo am-piandohana hatrany amin'ny fanitarana ny fahaizan'ny meltblown. Rehefa hita ny fandrahonana momba ilay virus vaovao satro-boninahitra dia nanao fepetra i Berry mba hampitomboana ny fahaizan'ny meltblown. Amin'izao fotoana izao, Berry dia namorona tsipika famokarana vaovao any Brezila, Etazonia, Sina, Angletera ary Eropa. , Ary hiasa amin'ny tsipika famokarana sivy sivy manerantany. Tahaka an'i Berry, ny ankamaroan'ny mpanamboatra lamba tsy tenona lehibe indrindra manerantany dia nampitombo ny fahafaha-mamokatra voakolokolo amin'ity taona ity. Lydall dia manampy andalana famokarana roa any Rochester, New Hampshire, ary ny andalana famokarana iray any Frantsa. Fitesa dia manangana tsipika famokarana meltblown vaovao any Italia, Alemana ary South Carolina; Sandler dia mampiasa vola any Alemana; Mogul dia nanampy andalana famokarana meltblown roa tany Torkia; Freudenberg dia nanampy andalana famokarana any Alemana. Mandritra izany fotoana izany, ny orinasa sasany izay vaovao amin'ny sehatry ny tenona tsy misy tenona dia nampiasa vola ihany koa tamin'ny tsipika famokarana vaovao. Ireo orinasa ireo dia miainga amin'ireo mpamatsy akora iraisam-pirenena lehibe ka hatramin'ny fanombohana kely tsy miankina, saingy ny tanjon'izy ireo iraisana dia ny manampy amin'ny fanatanterahana ny fangatahana manerantany ho an'ny fitaovana sarontava.
3.Ny mpanamboatra ny vokatra avy amin'ny fahadiovana mitroka dia manitatra ny sehatry ny orinasan'izy ireo amin'ny famokarana sarontava
Mba hananana antoka fa ampy ny fahafaha-manao famokarana tsy tenona hamaly ny fangatahan'ny tsenan'ny maska, ny orinasa amin'ny tsenan'ny mpanjifa isan-karazany dia nanomboka nampitombo ny famokarana sarontava. Noho ny fitoviana eo amin'ny fanamboarana sarontava sy ny vokatra avy amin'ny fahadiovana mifoka, ny mpanamboatra lamba fisaonana sy ny vokatra avy amin'ny fahadiovan'ny vehivavy no lohalaharana amin'ireo sarontava fiovam-po ireo. Tamin'ny volana aprily tamin'ity taona ity dia nanambara ny P&G fa hanova ny fahafahan'ny famokarana ary manomboka manamboatra sarontava amin'ny toby famokarana efa ho folo eran'izao tontolo izao. Nilaza ny tale jeneralin'ny Procter & Gamble, David Taylor, fa nanomboka tany Chine ny famokarana sarontava ary mitatra hatrany Amerika Avaratra, Eropa, Azia Pasifika, Moyen Orient ary Afrika. Ho fanampin'ny Procter & Gamble, nanambara ny fikasana hamokatra sarontava ho an'ny tsena soedoà ny Essity any Suède. Nanambara ny manam-pahaizana momba ny fahasalamana amerikana tatsimo CMPC fa afaka mamokatra sarontava 18,5 tapitrisa isam-bolana ato ho ato izy ireo. CMPC dia nanampy andalana famokarana sarontava dimy tany amin'ny firenena efatra (Silia, Brezila, Peroa ary Mexico). Isaky ny firenena / faritra, omena maska ​​ny serivisy ara-pahasalamana ho an'ny daholobe maimaimpoana. Tamin'ny volana septambra, Ontex dia namoaka tsipika famokarana manana fahaiza-manao famokarana manodidina ny 80 tapitrisa eo ho eo ao amin'ny orinasa Eeklo any Belzika. Nanomboka ny volana aogositra dia namokatra sarontava 100000 isan'andro ny tsipika famokarana.
4.Nitombo ny habetsaky ny famokarana solo-drano lena, ary mbola miatrika fanamby hatrany ny fahazoana ny fangatahan'ny tsena hamafana lena
Tamin'ity taona ity, miaraka amin'ny fitaky ny fangatahana famonoana otrikaretina sy ny fampidirana tsy tapaka ny fangatahana solo vaovao amin'ny indostria, fikarakarana manokana sy fikarakarana tokantrano, dia natanjaka ny fampiasam-bola amin'ity faritra ity. Tamin'ny taona 2020, roa amin'ireo mpikirakira lamba tsy misy tenona manerantany, Rockline Industries sy Nice-Pak, no nanambara fa hanitatra ny asan'izy ireo any Amerika Avaratra izy ireo. Tamin'ny volana Aogositra, nilaza i Rockline fa hanangana làlan-pamokarana famonoana otrikaretina vaovao indrindra mitentina US $ 20 tapitrisa any Wisconsin. Araka ny tatitra, io fampiasam-bola io dia hitombo avo roa heny amin'ny fahaizan'ny orinasa mpamokatra. Ny tsipika famokarana vaovao, antsoina hoe XC-105 Galaxy, dia ho lasa iray amin'ireo tsipika famokarana famonoana otrikaina betsaka indrindra ao amin'ny orinasan-tsoavaly marika lena tsy miankina. Antenaina ho vita amin'ny tapaky ny taona 2021 io. Toy izany koa, mpanamboatra tavy lena-Nice-Pak dia nanambara ny drafitra hanatsarana ny fahafahan'ny famokarana famonoana otrikaretina ao amin'ny orinasa Jonesboro. Nice-Pak dia nanova ny drafitry ny famokarana ozinina ho 24 ora isan'andro, 7 andro isan-kerinandro amin'ny famokarana drafitra, amin'izany dia manitatra ny famokarana. Na dia betsaka aza ny orinasa no nampitombo be ny fatran'ny solo-drano lena, dia mbola miatrika fanamby ihany izy ireo amin'ny fanatanterahana ny fangatahan'ny tsena ny famafana desinfection. Tamin'ny volana Novambra, nanambara ny fitomboan'ny famokarana sy ny fiaraha-miasa amin'ireo mpamatsy antoko fahatelo i Clorox. Na dia fonosana efa ho iray tapitrisa fonosana Clorox aza dia halefa any amin'ny magazay isan'andro, dia mbola tsy afaka mamaly ny fangatahana ihany izany.
5.Ny fidirana an-tsehatra eo amin'ny sehatry ny famatsiana ny sehatry ny fahasalamana dia nanjary fironana mazava
Tao anatin'izay taona faramparany izay dia nitohy ny fampidirana ny sehatry ny famatsiana ny sehatry ny fahasalamana. Nanomboka io fironana io rehefa nahazo an'i Avintiv ny Berry Plastics ary nanambatra ireo tenona sy horonantsary, izay singa fototra roa amin'ny vokatra fidiovana. Rehefa nahazo an'i Clopay i Berry, mpanamboatra teknolojia sarimihetsika miaina amin'ny taona 2018, dia nanitatra ny fampiharana azy tamin'ny sehatry ny sarimihetsika mihitsy aza. Tamin'ity taona ity, mpanamboatra lamba tsy vita tenona iray hafa Fitesa koa dia nanitatra ny orinasan-tsariny tamin'ny alàlan'ny fahazoana ny orinasan'ny Personal Care Films an'ny Tredegar Corporation, ao anatin'izany ny toby famokarana any Terre Haute, Indiana, Kerkrade, Netherlands, Rétság, Hongria, Diadema, Brazil, ary Pune, India. Ny fanamafisana dia manamafy ny sarimihetsika Fitesa, fitaovana elastika ary orinasa laminate.